Kwesịrị ị nweta akwụkwọ ikike njikwa akụrụngwa gị?
Location: Mbido » Ịdee » Ọbịa ọbịa » Kwesịrị ị nweta akwụkwọ ikike njikwa akụrụngwa gị?
Onye njikwa akụrụngwa na-ahụ maka ilekọta ọrụ kwa ụbọchị nke ụlọ ma ọ bụ oghere ọfịs. Ha na-ahụ na ihe niile na-aga nke ọma na ndị ọrụ na-echekwa ma na-arụpụta ihe.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịkpọ onye njikwa akụrụngwa ọhụrụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle. Site na achọrọ ụgwọ ọnwa, asambodo njikwa akụrụngwa maka ọrụ ọrụ, ebe a bụ ajụjụ ise ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu iwere mmadụ ọrụ.
Ndị na-ahụ maka ihe owuwu na-ahụ maka ọtụtụ ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'otu oge, na-eme ka ọrụ ha bụrụ ihe ịma aka karị. Nke a bụ ajụjụ ise ị kwesịrị ịjụ onwe gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta onye njikwa akụrụngwa zuru oke.
1. Gịnị bụ Asambodo Ha?
Ndị njikwa akụrụngwa enwetara asambodo agafeela ule nke otu Facilities Management Association of America na-elekọta. FMAA na-enye ọkwa abụọ nke asambodo: Onye njikwa ihe owuwu ọkachamara na asambodo Master Facility Manager.
Nhọpụta CPFM chọrọ ka ndị na-aga ime gafere usoro CMFA Fundamentals of Facility Management na usoro ule na isiokwu dị ka njikwa nchekwa, mmefu ego, akụrụngwa mmadụ, njikwa ihe owuwu, na mpaghara ndị ọzọ metụtara njikwa akụrụngwa. Ndị Candidates ga-emechakwa awa 300 nke mmepe ọkachamara iji nweta asambodo a.
Iji nweta aha CPMM, ndị aga-eme ntuli aka kwesịrị ịgafe otu ule ahụ nke achọrọ maka CPFM. N'agbanyeghị nke ahụ, ha kwesịkwara igosipụta nka na mpaghara ndị ọzọ dị ka njikwa ọrụ, njikwa ihe egwu, na nkwado. Ndị Candidates gụchara akwụkwọ mmụta na ule ndị a nwere ike ịtụ anya ime ihe dị ka $50k kwa afọ.
2. Ahụmahụ ole ka ha nwere?
Onye tozuru oke ga-enwe ahụmịhe afọ ole na ole ijikwa nnukwu ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Nke a pụtara na ha ga-ama ka ha ga-esi bute ọrụ ụzọ na ijikwa ndị mmadụ. Ọ dị mkpa ịmara na ụfọdụ ndị njikwa akụrụngwa na-amalite n'ihe na-erughị afọ atọ nke ahụmịhe. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe ọhụrụ ka ha nweta ahụmịhe bara uru n'oge nkuzi ma ọ bụ ọnọdụ nwa oge.
3. Onye ndoro-ndoro ochichi ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ?
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị njikwa akụrụngwa na ndị injinia, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị ọrụ ngo,
na ndị ọkachamara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye nwere ike imekọ ihe nke ọma na ndị ọzọ, chọọ onye ga-eso ndị otu dị iche iche rụọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ. Ezigbo onye na-ahụ maka ihe owuwu ga-aghọta ihe otu ọ bụla chọrọ yana ihe mere e ji mee mkpebi ụfọdụ.
4. Hà Pụrụ Imeri Ọnọdụ Nrụgide?
Enwere ike ịkpọ ụfọdụ ndị na-ahụ maka ihe owuwu ka ha mesoo mpụ ọkụ, ọdachi ndị na-emere onwe ha, ma ọ bụ ihe mberede ndị ọrụ. Ọnọdụ ndị a chọrọ iche echiche ngwa ngwa na ime mkpebi siri ike. Chọọ onye ndoro-ndoro anya nke na-egosipụta ikike iduzi siri ike mgbe ị na-enwe ọnọdụ nrụgide.
5. Ọ nwere ihe ọzọ m kwesịrị ịma gbasara ha?
Chọọ onye ndoro-ndoro nke nwere ndekọ ndekọ nke ihe ịga nke ọma. Rịọ maka ntụaka sitere n'aka ndị were ọrụ gara aga wee lelee nyocha ịntanetị. Ị nwekwara ike ịchọrọ ndị na-aga ime ajụjụ ọnụ tupu ị họrọ otu.
Ụdị asambodo njikwa akụrụngwa
Enwere ụdị asambodo njikwa akụrụngwa abụọ dị. Ndị otu njikwa akụrụngwa na-enye otu. Otu International Facility Managers Association na-enye nke ọzọ. Otu abụọ a na-enye mmemme yiri nke ahụ, yabụ mmemme ọ bụla ị họọrọ, ị nwere ike inwe obi ike na ị họrọla ụzọ ziri ezi.
Nke a bụ ọdịiche dị n'etiti mmemme abụọ a:
• CPFM – Emebere mmemme FMAA maka ndị mmadụ nwere akara ugo mmụta bachelor na azụmaahịa ma ọ bụ mpaghara ọzọ. FMAA na-enye Associate of Science in Facility Management degree yana asambodo ya. Iji ruo eru maka akara ASFM, ụmụ akwụkwọ ga-enwerịrị opekempe nke awa kredit iri na abụọ na kọleji ma ọ bụ mahadum enwetara ikike. Ụmụ akwụkwọ wee gụchaa akwụkwọ fọdụrụnụ site na mmemme ọzụzụ FMAA.
• CPMM - Usoro IFMA kwadoro na-elekwasị anya na nkà bara uru. Ndị mmadụ n'otu n'otu gụchara akwụkwọ ikike nke IFMA na nkuzi ụlọ ọrụ na-enweta asambodo na mpaghara isi anọ: nhazi saịtị, ọrụ ụlọ; mmezi; na ike arụmọrụ. Na mgbakwunye, ha na-amụta banyere teknụzụ kachasị ọhụrụ ejiri na ụlọ ọrụ.
Mmemme abụọ a gụnyere nkuzi klaasị, omume ejiri aka, na nyocha ederede. Mgbe emechara mmemme ahụ, ndị na-aga ime nwere ike itinye akwụkwọ ka ha nọrọ ọdụ maka ule asambodo.
Ọrụ nke onye njikwa akụrụngwa
Onye njikwa akụrụngwa na-ahụ maka akụkụ niile nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ọrụ ha gụnyere ijide n'aka na ihe niile na-aga nke ọma, gụnyere idobe ụkpụrụ nchekwa na nchekwa dị elu. Nke a bụ ole na ole n'ime ọrụ dịịrị onye njikwa akụrụngwa:
1. Na-edobe ụkpụrụ nchekwa
Ndị na-ahụ maka ihe owuwu na-ahụ na akụkụ ọ bụla nke ụlọ na-emezu ụkpụrụ ahụike na nchekwa siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ha na-ahụ na ọ dịghị kemịkal dị ize ndụ dị n'akụkụ isi mmiri ma ọ bụ ebe a na-akwadebe nri. Ha na-enyochakwa ịdị mma ikuku ma na-edebe usoro kpo oku dị ọcha.
2. Na-echekwa ndị ọrụ nchekwa
Ndị na-ahụ maka akụrụngwa ga-echebe ndị ọrụ site na mmerụ ahụ. Nke a pụtara ịhụ na ebe a na-arụ ọrụ na-egbo mkpa ergonomic, na-enye ọkụ kwesịrị ekwesị, na ịwụnye ihe ọkụ ọkụ. Ha kwesịkwara ịnye ụzọ ọpụpụ mberede na ngwa enyemaka mbụ.
3. Na-emesi ike ịrụ ọrụ ike
Ndị na-ahụ maka akụrụngwa na-ahụ maka ojiji ike ụlọ ahụ. Ha kwesịrị ime nyocha oge niile wee hụ na sistemụ HVAC na-arụ ọrụ nke ọma. Ha kwesịkwara ịwụnye ngwaọrụ na-azọpụta ike dị ka ọkụ ọkụ na temometa.
4. Nyochaa Nlekọta
Ndị na-ahụ maka akụrụngwa kwesịrị inyocha akụrụngwa oge niile iji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ha kwesịkwara idowe ndekọ na-edekọ nsogbu ọ bụla ha nwetara n'oge nrụzi.
5. Na-ahụ maka nchekwa ụlọ
Ndị na-ahụ maka ihe owuwu kwesịrị ịhụ na echekwabara ụlọ. Ha kwesịrị ileba anya ebe ị ga-esi nweta ma hụ na akpọchiri ụzọ mgbe ejighị ya. Ha kwesịkwara ịzụ ndị ọrụ ka ha mata ihe a na-enyo enyo ma kọọ nchegbu ọ bụla ozugbo.
Ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ụzọ ọrụ dị iche iche dị. Ebe ụfọdụ ndị na-ahụ maka akụrụngwa nwere ike bụrụ ọkachamara n'otu mpaghara dịka ụlọ ọrụ mmezi ngwá ọrụ ndepụta, ndị ọzọ nwere ike họrọ ilekwasị anya n'ọtụtụ ọzụzụ. N'agbanyeghị ụzọ ị họọrọ, onye njikwa akụrụngwa ga-arụ ọrụ dị mkpa n'idebe ndị mmadụ nchekwa na ahụike.
Energy Management Science
Ndụmọdụ bara uru maka otu esi ede akwụkwọ mkpali
Kedu akwa akwa akwa kacha dị mma?
Ukraine bụ onye mmeri! Ọ bụ ọchịchị!
Pfizer na-echeta Inderal-LA (propranolol ...
Ahịa Mkpọpụta Protein Azụ zuru ụwa ọnụ - nyocha zuru ezu...
3,000 oche ndị ọzọ na-atụ anya site na South Korea na ...
Guam na-akwado maka nloghachi nke ahịa Japan na nleta...
Ụbọchị ndị ọbịa ụgbọ elu mba ụwa: Wyndham Hotels...
Akụkọ ọhụrụ gbasara ndị agadi na ahụike uche n'oge COVID-19
Onye dike njem njem ọhụrụ a chọrọ ka ị tie mkpu maka Ukraine!
Ogige ntụrụndụ mba kacha nwee enyi na USA
Nsonaazụ Ọnwụnwa ọhụrụ nke Gene Therapy maka siri ike...
Onye isi ala Peru kagburu iwu mkpọchi Lima ya
Ihe omuma ohuru na ọgwụgwọ antiviral maka ịba ọcha n'anya B na C
Mgbu mgbe arụchara ọrụ belatara site na iji CBD